Home STARS EUROPEAN Paul Pogba tantaran'ny tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika bebe kokoa
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny sariitatry ny baolina kitra miaraka amin'ny anarana; 'Pogboom'. Ny tantaram-pianakavian'i Paul Pogba momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra anarana dia mitondra ho anao ny fitantarana feno momba ny hetsika mahatalanjona hatramin'ny fotoan'ny fahazazany hatramin'izao. Ny fanadihadiana dia ahitana ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana, ny fifandraisana amin'ny fiainana ary ny maro hafa momba ny OFF-Pitch (kely fantany) momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra momba ny endriny mahafinaritra sy ny fahaiza-manaony mahery vaika, saingy vitsivitsy ihany no mandinika ny Bio Paul Pogba izay mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, alefaso.
Paul Pogba Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy navoaka Biography Facts-Fiainana tany am-boalohany
Paul Labile Pogba dia teraka tamin'ny 15th of March 1993 at Lagny-Sur-Marne, Frantsa. Izy dia teraka tamin'ny reniny Kongoley, Yeo Moriba ary ny rain'i Guinean, Fassou Antoine izay samy nifindra monina tany Frantsa mba hitady ahitra maitso tao anatin'ny 1990 voalohany.
Pogba dia teraka volana martsa taorian'ny nifindran'ny ray aman-dreniny tany Frantsa, fivoarana izay niantoka ny fijanonany tao amin'ny firenena. Talohan'ny nahaterahan'i Paul Pogba, i Yeo (renin'i Pogba) dia nanana kambana maromaro antsoina hoe Florentin sy Mathias (zokiolona Paul Pogba) izay nitoetra tao Conakry, Guinée (tany an-tanindrazany any Afrika) taorian'ny fifindran'ny ray aman-dreniny tany Frantsa talohan'ny nidirany tao amin'ny fianakaviana tany Frantsa taona maro taty aoriana.
Paul Pogba Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra momba ny tantaram-piainana -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Paul Pogba dia avy amin'ny tranon'ny 'Testosterone', trano iray tarihin'ny lehilahy. Fassou Antonie Pogba (dadan'i Paul Pogba) dia lehilahy be fitiavana sy tia fihavanana. Tsy manao zavatra firy amin'ny orinasan-janany izy (Football) ary i Paul Pogba dia tsy nahavita nifandray akaiky taminy nandritra ny taona maro. Na izany aza dia mizara fifandraisana matanjaka amin'ny reniny i Pogba.
Paul Pogba Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra momba ny tantaram-piainana -Super Mom
Ny renin'i Paul Pogba (Yeo Moriba Pogba) no atidoha any ambadiky ny mpilalao baolina kitra malaza eran-tany. Ity supermum 'proud' (sary etsy ambany) ity dia nanampy ireo tovolahy telo izay nihalehibe ho mpilalao baolina matihanina.
Ny fifandraisany amin'i Paul Pogba zanany lahy farany dia zo manokana manomboka amin'ny fiandohana. Nanome toky izy fa nankafiziny ny tombotsoany tamin'ny nahaterahany ny zanany farany indrindra ary nidera sy nampihetsi-po azy. Amin'ny lafiny iray, dia nitovy azy tamin'ny zanany lahy hafa izy.
Ny zokiolona Paul Pogba (Mathias ary Florentin) dia 'nanamelo-tena' foana. Manome toky ihany koa izy ireo fa ny zandriny lahy (amin'izao fotoana izao) dia maka ny dingana ivon'ny hetsika izay miharihary eo amin'ny sary etsy ambany.
Paul Pogba Tantara an-tsarimihetsika tsy mbola voatanisa Biography Facts-Asa fanorenana
Nanomboka ny asany tamin'ny lalao baolina kitra i Paul Pogba tamin'ny faha 6 taonany nilalao ho an'ny US Roissy-en-Brie, klioban'ny baolina kitra izay kilaometatra vitsivitsy atsimon'ny tanindrazany.
Nandany fito taona izy tao amin'ny klioba talohan'ny nidirany tao amin'ny US Torcy, toerana niasany ho ekipa mpitarika ao amin'ny ekipa 13.
Fotoana fohy talohan'ny nahatongavany tao amin'ny Akademia Le Havre malaza tamin'ny taona 13-taona ary nampiseho fampisehoana mahatalanjona izay nahasarika ny sain'ny klioban'ny Eoropeana nandritra ny fandrosoana nandritra ny taona. Raha nanambara i Pogba fa hanatevin-daharana an'i United ao amin'ny 2009, dia gaga i Le Havre ary niampanga ny fanoherana mena "Tena lehibe" vola miditra - ary trano iray - ho an'ny ray aman-drenin'i Pogba hampiato ny fifanekena iray efa hatrany am-piandohana.
Le Havre no mihevitra ny fandrosoana tsy hiditra sy tsy azo antenaina amin'ny klioban'ny ligy voalohany amin'ny famoahana fanambaràna iray hamotsorana ny alahelony.
"Tamin'ny fotoana niparitahan'ny antoko maro manohitra ny 'fivarotana zaza tsy ampy taona', dia tsy misalasala ny hanala ny zaza 16 taona i Manchester United."
Na izany aza, i Manchester United dia navela ny fahadisoana nataon'ny FIFA ary ny Le Havre dia nanapa-kevitra ny tsy hiantso fa hanaraka ny lalan'ny diplaomasia amin'ny alàlan'ny fifanarahana amin'ny Red Devils.
Paul Pogba dia nandany ny 2 taona farany tamin'ny asa tanorany tamin'ny Manchester United avy amin'ny 2009 ka hatramin'ny 2011. Tany Etazonia dia nihaona sy nanao ny Pogba Jesse Lingard ny namanao akaiky indrindra. Jesse (sary etsy ambany miaraka amin'i Pogba) dia niasa tamin'ny Manchester United tamin'ny taona 2000-2011.
Paul Pogba Tantara an-tsarimihetsika tsy mbola voatanisa Biography Facts-Mitsangàna mba haka izany
Pogba dia nandany telo taona tany Etazonia talohan'ny tsy fahampian'ny fotoana dia nanosika ny hivoatra ho any Juventus, klioba izay nanampy tamin'ny fandresena ny andian-dalan'ny Serie A efatra hafa, ary koa ny anaram-boninahitra Coppa Italia sy Supercoppa italiana.
Ny mpilalao azy dia nanamafy ny fiverenany tany Manchester United noho ny fividianana klioban'ny £ 89.3 Million Pounds amin'ny 2016. Roa taona taty aoriana dia lasa lehilahy 23 izy Frantsa frantsay izay nandresy ny World 2018 Cup ao Rosia. Ny ambiny, araka ny filazany, dia tantara.
Paul Pogba Tantara an-tsarimihetsika tsy mbola voatanisa Biography Facts-Relationship Life
Paul Pogba dia tsy misy sahy manalavitra ny fofom-paty miaraka amin'ireo vehivavy tsara tarehy, izay hita mazava amin'ny safidiny ny manana fiara tsara tarehy na sipa mandehandeha amin'ny anarana Maria Salaues.
Ny Maria Salaues dia modely izay miorina any Miami ny asa, fampivoarana izay mahatonga azy ho sarotra ny hitsidika ny fony ao Manchester. Na dia najanona tamina endrika ambany aza ny fifandraisan'i Pogba tamin'ny boliviana 23-taona, dia nanao dingana maromaro izay mampiseho ny halehiben'ny fahombiazany tamin'ny lalao fitiavany izy ireo.
Ny famoahana voalohany ny mombamomba ny fiarahany dia tamin'ny 2017 rehefa nahitana azy ireo voalohany. Mandroso haingana hatramin'ny Jona 2018 Maria Salaues dia miseho toy ny feon-kiraro ankeriny rehefa nipetraka teo akaikin'ny renin'i Pogba tao amin'ny kianjan'i Luzhniki ao Moskoa nandritra ny lalao gropy tamin'ny lalao famaranana ny dian'i Frantsa tamin'i Danemark.
Paul Pogba Tantara an-tsarimihetsika tsy mbola voatanisa Biography Facts-The Bloodline of Strength
Ny halehiben'i Paul Pogba dia loza mitatao ho an'ny mpilalao baolina kitra mpanohitra. Ny maha-izy azy araka ny mpikaroka dia manana fototeny razambe izay hita amin'ny endrik'ireo mpanao fanatanjahan-tena mainty toy ny Amerikana Kobe Bryant izay avy amin'ny ràn-tery mahery. Ny matanjaka mahery vaika nataon'i Paul Pogba, matanjaka sy matanjaka ny talentany, dia nahatonga azy haka ny namany.
Ny fanoloran-tenany hanatanterahany ny tanjany dia tsy mahafantatra fetrany ary tsy fivoarana vao haingana. Nampiasa ny mpitsabo sy ny mpitsabo izy hatramin'ny nandaozany an'i France tamin'ny taona 16. Ny mpitsabo mpanampy sy ny mpitsabo dia miantoka fa izy no misarika ny saina amin'ny lalao ary mitazona fepetra henjana mandritra ny vanim-potoana ivelan'ny vanim-potoana.
Paul Pogba Tantara an-tsarimihetsika tsy mbola voatanisa Biography Facts-Fanofanana fanatanjahan-tena
Paul Pogba dia manao io fiofanana matanjaka io hanatsarana ny tanjany hatry ny ela ary manampy azy amin'ny fanatsarana ny fahaiza-manaony sy ny fahombiazany. Ny fahaizany kickboxing dia manambara fa vonona izy hiatrehana ny loza mitatao amin'ny lalany.
Araka ny voalazan'i Paoly;
"Ny olona rehetra izay manandrana manaparitaka ahy dia mety ho diso fanantenana"
Paul Pogba Tantara an-tsarimihetsika tsy mbola voatanisa Biography Facts-Dance Moves
Pogba dia nampiantrano mpankafy dihy maromaro izay ampiasainy amin'ny fankalazana isaky ny latsa-paka. Paul Pogba dia hita etsy ambany amin'ny fampiharana dihy vaovao miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy Jesse Lingard.
Ny hira izay nampandrenesina ny duo dia Mpanakanto Nizeriana taloha, Wizkid.
Paul Pogba Tantara an-tsarimihetsika tsy mbola voatanisa Biography Facts-Mpitarika baolina kitra ho an'ny firenena
Tsy niparitaka tao amin'ny ekipa ambony ao Frantsa i Pogba. Nanomboka ny fisehoany ho an'ny Les Bleus avy amin'ny U16 ho an'ny ekipa U20 'Espoirs'.
Tonga tao amin'ny 2013 ny ora tena tsara indrindra rehefa nitondra an'i Frantsa hankalaza ny Mondialy U20. Ny mpilalao baolina kitra no nitazona ny lafiny iray, namadika sazy an-tranomaizina tamin'ny fifaninanana farany tamin'ny Orogoay ary nantsoina hoe mpilalao amin'ny fifaninanana.
Paul Pogba koa dia nahazo ny loka Golden Ballad nandritra ny FIFA U-20 farany teo amin'i Frantsa sy Uruguay tao amin'ny kianja Ali Sami Yen tamin'ny 13 2013 tamin'ny XNUMX, any Istanbul, Torkia.
Paul Pogba Tantara an-tsarimihetsika tsy mbola voatanisa Biography Facts-Elder Brothers
Paul Pogba anti-panahy Florentin Pogba ary Mathias Pogba dia samy mpilalao baolina kitra sy kambana mitovy.
Ny Loholona Brothers Paul Pogba (Both Twins) - Florentin Pogba (Ankavia) sy Mathias Pogba (ankavanana)
Teraka tany Guinée izy ireo. Florentin Pogba (sary ankavia no kapiteny ankehitriny ao Guinea) toy ny tamin'ny fotoana nanoratana.
Paul Pogba Tantara an-tsarimihetsika tsy mbola voatanisa Biography Facts-Fifandraisana amin'ny ray aman-dreny
Araka ny voalaza tetsy aloha, ny Guinean no rain'i Pogba raha teraka avy amin'ny Kongoley ny reniny. Samy mifandray am-po amin'ny zanany lahy izy ireo. Na izany aza, ny maman'i Paul Pogba dia niaraka taminy tamim-pahombiazana hatrany. Mahatsiaro ho afa-po i Dada amin'ny fihazonana sarina ambany ary tsy manao ny asan'ny zanany.
Paul Moggy sy Daddy Paul Pogba
Indray mandeha, i Manchester United dia nanolotra £ 85,000 ho an'ny ray aman-dreny tsirairay mba hampiroborobo ny zanany lahy (Paul Pogba) hiaraka amin'izy ireo amin'ny 2009. Hainao?. Samy nanaiky izy ireo. Nahita ny fofon'izy ireo voalohany tao Manchester United izany.
Paul Pogba Tantara an-tsarimihetsika tsy mbola voatanisa Biography Facts-Mummy's Soccer Business
Matetika izy no marika hoe 'The Supermum and tycoon business business' izay namadika an'i Paul Pogba zanany lahy ho vola an'arivony tapitrisa dolara tsy ho ela.
Nolazain'ny lehibeny Yeo Moriba ho mpitan-trano, mpitantana ary mpanolotsaina izy. Izy koa dia manao ny anjara asany amin'ny zanany lahy roa hafa (Florentin sy Mathias) na iraisam-pirenen'i Guinea.
Nijanona teo aminy izy na teo aza ny faneriterena nataon'i Alex Ferguson nandresy lahatra azy mba hamela ny zanany hijanona ao amin'ny klioba. Raha nanontaniana momba ny fihaonany tamin'i Ferguson i Yeo Moriba, nihomehy izy raha nahatsiaro ny iray tamin'ireo fampisehoana maro nataony niaraka tamin'ny lehiben'ny Ex-Man U, izay efa niady tamin'ny ho avy an'i Paul Pogba zanany.
Araka ny filazany,
"Rehefa tonga ato an-tranoko i Ferguson .. Mibaribary fa diso fanantenana izy. Nolazaiko azy foana, tsy hanoratra intsony i Paul zafikeliko. Vokatr'izany, nanosika azy i Ferguson, tsy nilalao azy izy, irery i Paul kely. Niantso ny birao'i Ferguson mihitsy aza izy tamin'ny fomba niasanyed. Nampalahelo i Paul Pogba I Paul Scholes dia niverina avy nisotro ronono nandritra ny enim-bolana tamin'ny volana janoary 2012 mba hanavotana toerana misy ny faritra afovoan-tanin'i Etazonia izay hitany maso. Ny 18 tamin'izany fotoana izany ihany ary niaraka tamin'ny fisoloana fisoloana vitsivitsy tamin'ny anarany tamin'ny fiadiana ny amboara eran-tany, dia nahatsapa i Pogba fa tokony homena azy izy. Izany dia natao Tapa-kevitra ny handao ny klioba ny zanako lahy ".
Nitohy izy ...
Na dia teo aza ny olana rehetra dia mbola nisy fahagagana foana. Tonga tampoka tao Juventus ny zanako lahy. Amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy miteny ianao fa fantatro kely momba ny baolina kitra, mety ho reny tsotra aho saingy tsy misy olona afaka hamitaka ahy amin'ity raharaha ity, "
Ny vadin'i Yeo Moriba Pogba dia mbola mandà ny maha-andraikitra ofisialy azy ho mpitantana ny zanany lahy. Araka ny heviny;
"Mangataka torohevitra aho, fa izany rehetra izany. Manaja ahy i Paul, ary mihaino ny zavatra holazaiko azy izy. "
Paul Pogba Tantara an-tsarimihetsika tsy mbola voatanisa Biography Facts-Ny fahasosoran'i Paul Pogba tamin'i Alex Ferguson
Nandritra ny fotoana nahasosotra azy tao Manchester United, i Paul Pogba dia fantatra tamin'ny teny hanoanana;
'Aleoko maty toy izay tsy milalao baolina'.
Tsy matahotra izy. Miala sasatra izy rehefa tsy mahazo tombontsoa azony. Izy dia iray tamin'ireo mpilalao tsy mba natahotra izay nanana baolina handeha hiaraka amin'ny mpanazatra Sir Alex Ferguson hilaza;
'' Tompoko, mieritreritra aho fa ampy, Andramo, ary hasehoko anao raha vonona aho na tsia ''.
Ao amin'ny lahatsary eto ambany, Paul Pogba dia niampanga an'i Manchester United "Tsy fanajana", nilaza izy fa voatery nampiofana irery nandritra ny fifanolanana fifanarahana izay nialoha ny nifindrany tany Juventus, 'ilay vehivavy antitra '.
Paul Pogba Tantara an-tsarimihetsika tsy mbola voatanisa Biography Facts-fivavahana
Paul Pogba dia Miozolomana amin'ny finoana. Matetika izy no mahita vavaka fohifohy talohan'ny lalao.
Ny fitiavan'i Paul Pogba amin'ny finoana silamo.
Na dia mpilalao baolina kitra aza izy, Paul Pogba dia manana kolontsaina Islamika matanjaka eo amin'ny toerana. Manaraka sy manaja ny kolontsaina Arabo izy.
Paul Pogba Tantara an-tsarimihetsika tsy mbola voatanisa Biography Facts-Tantara avy ao amin'ny anarana Nick 'Paul the Octopus'
Ho an'ireo maro izay nijery an'i Pogba teny an-dalana, dia misy olona iray mitazona feon-dehilahy iray mitaingina tongotra lava sy tanjaka voajanahary izay mbola ampiasainy androany amin'ny fanafihana sy ny fiarovana.
Ny tongony 6.3 sy ny tongony enjehina dia ankafizin'ny mpankafy baolina kitra maro. Izany no nahatonga ny mpankafy navoaka azy ("Paul the Octopus"). Io anarana io dia tonga noho ny tongony lava sy malefaka. Ny mpankafy dia mino fa ny tongony dia toy ny teboka iray orita rehefa mifamahofaho, mihazakazaka, manodidin-doha ary mitifitra tampoka.
Ny anadahy zandriny indrindra any Pogba dia naniry ny niantso azy hoe 'Pogboom'noho ny ezaka lavitr'ezaka nataony teo amin'ny tanjona. Izy io dia anaram-bosotra voasoratra eo amin'ny fatorany.
Paul Pogba Tantara an-tsarimihetsika tsy mbola voatanisa Biography Facts-Momba ny anarana hoe 'Paul the Octopus'
Ny anarana 'Paul the Octopus'dia avy amin'ny Octopus malaza iray izay nampiasaina haminavina lalao nandritra ny mondialy 2010. Paul (Ankehitriny ary farafaharatsiny namoy ny ain'ny Global Sports Betting Billionaire Owners) dia naminany tamim-pahombiazana ny lalao baolina kitra eran-tany. Ho an'i Paoly, mitoky amin'ny baoritra dia midika izany fa hahazo ny lalao manaraka ny firenena.
Paul Pogba Tantara an-tsarimihetsika tsy mbola voatanisa Biography Facts-LifeBogger Rankings
Mendrika ny hanamafy fa ny mpilalao toa an'i Paul Pogba dia maneho karazana gigantic ho an'ny baolina kitra eran-tany. Tsy ny tarehintsikiny sy ny akanjo mamirapiratra ihany no mahavariana, fa ny fomba amam-panao ataony dia mahatonga azy ho sariaka amin'ny taranaka FIFA-Vine. Tsindrio eto ambany, ny fialan-tsasatra Paul Pogba.
FACT CHECK: Misaotra noho ny famakiana ny tantaram-pahaizan'i Paul Pogba momba ny tantaran'ny tantaram-piainana. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!.
Ny tantaran'i Emre Can Childhood Plus Untold
Febroary 25, 2018
Raphael Varane Tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Janoary 8, 2018
Aogositra 5, 2017